« Newer Entries ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 90W မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ အဆင့် HIGH သို့ ရောက်ရှိလာပြီ
One comment Uncategorized ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 90W ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်
3 comments Uncategorized အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း WUTIP-20W ၏ မုန်တိုင်း အဖျားပိုင်း ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား စတင်ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized INVEST-93W လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 20W ဖြစ်လာပြီ
2 comments Uncategorized မုန်တိုင်းငယ် 01B မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on May 10th, 2013%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 92B သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာကာ မုန်တိုင်းအမည် 01B ဟု အမည်ပေးထားပါသည်။ (၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မုန်တိုင်းရာသီအတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ပထမဦးဆုံး ဖြစ်ပေါ်သည့် မုန်တိုင်း ဖြစ်ပါသည်)
မုန်တိုင်းငယ် 01B သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပို့ဘလဲယားမြို့ တောင်ဘက် မိုင် ၄၃ဝ ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကော့သောင်းမြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၅ဝဝ ခန့်၊ ကိုကိုးကျွန်းလေဆိပ်၏ တောင်ဘက် မိုင် ၆ဝဝ ကျော်ခန့်၊ ပုသိမ်မြို့၏ တောင်-အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၈ဝဝ ခန့် ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၂ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် . . . → Read More: မုန်တိုင်းငယ် 01B မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized လေဖိအားနည်းဆဲလ် 91W ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်း ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ
By mmweather.ygn, on April 17th, 2013%
လေဖိအားနည်းဆဲလ် 91W သည် ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်း လွန်ခဲ့သော ၆ နာရီက အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၂ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ဆက်လက် ရွေ့လျားကာ မြန်မာနိုင်ငံ တနင်္သာရီတိုင်း၊ မြိတ်မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁၃ဝ ခန့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ Huahin မြို့ တောင်ဘက် ၉၅ မိုင်ခန့် ပင်လယ်တွင် တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ 91W ၏ အရှိန်ကြောင့် ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်း နေရာအနှံ့အပြား မိုးရွာပြီး အရှေ့ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးကြီးနိုင်ကြောင်း သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
Warning (ထိုင်းမိုးလေဝသဌာန ထုတ်ပြန်ချက်) “Low Pressure in lower South China Sea” No. 23 Time Issued : . . . → Read More: လေဖိအားနည်းဆဲလ် 91W ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်း ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ
Leaveacomment Uncategorized ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တွင် တိမ်ထုဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ
လေဖိအားနည်းဆဲလ် 91W- (91W အခြေအနေ) ဖြစ်ပေါ်ရာဒေသ၊ ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တွင် တိမ်ထုကြီး ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဂြိုလ်တု animation ပုံများအရ ပိုမိုကြီးမားလာလျှက်ရှိကာ မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားလျှက်ရှိပါသည်။ ဤအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုင်းမိုးလေဝသဌာနမှ အောက်ပါ သတိပေးချက်ကို ဧပြီလ ၁၇ ရက် – နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ထားပါသည် –
Warning – “Low Pressure in lower South China Sea” No. 22 Time Issued : April 17, 2013 The low pressure cell moves from the upper Andaman Sea to the . . . → Read More: ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တွင် တိမ်ထုဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ